သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: ရှေးဟောင်းစာတစ်မျက်နှာ
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 12:28 AM
ညွှန်းလွန်းဖွဲ့ လွန်းရင် ခံစားချက်တွေ ပေါ့သွားသလို ဖြစ်ပေမယ့်
ဟန်ဆောင်မှုတွေဟာ တခါတခါ မျက်လုံးထဲမှာ ဖြတ်ကနဲ ပေါ်လာတတ်သလားလို့ …
ရည်ရွယ်ခံရသူရဲ့ နှလုံးသားမှာ ခံစားလို့ရခဲ့ရင် သူဟန်ဆောင်နေတာ ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မှာပါ…
သူပြောတာကို ဘာကြောင့် မယုံပေးလိုက်တာလဲ အစစ်တွေချည်းပဲတဲ့ ဘယ်လောက်အသဲမာတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ပဲ
ဖြစ်ဖြစ် တကယ်ချစ်မိသွားခဲ့ရင်တော့ အရာရာကလည်း ဆုံးရှုံးသွားသလိုပါပဲ...မဟုတ်တာကို မဟုတ်ဘူးပြောပေမယ့် ယုံကြည်မှုကိုရပိုင်ခွင့်မရှိတော့လည်း တိတ်ဆိတ် ငြိမ်နေမိလိုက်တယ် အဲ့လို ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်းကိုကော ၀န်ခံခြင်းလို့သတ်မှတ်ကြတယ်လား။ွ၊
“စာစုတွေကြားက ရီဝေနေတဲ့ မျက်ဝန်းတစ်စုံ၊ ထိုမျက်ဝန်းထဲမှာ သူမ၏ ပုံရိပ်။ ”
အဲ့မျက်ဝန်းတွေကြားမှာ အရည်လဲ့နေတယ် တွေ့အောင်ရှာကြည့်နော့် ယောက်ျားတွေလည်း အချစ်အတွက် မျက်ရည်ဝဲခွင့်မရှိဘူးလို့ ဘယ်သူကပြောလဲ ???
(အစ်မပို့စ်နဲ့လည်း မဆိုင်သလိုဖြစ်နေတယ်ဗျ ကျနော်ရေးခဲ့တဲ့ မှတ်ချက်က ရေးသူလည်းဖွဲ့ချင်တာဖွဲ့ ဖတ်သူကလည်း ဖတ်ချင်တာဖတ်စိတ်ထဲ ခံစားမိတာ ရေးချလိုက်မိပြီး ဖြစ်တယ်ဟုတ် :P)
I'll come back to putacomment. My com is currently in hospital..that's why.
"မ ဟုတ်ဘူး.. လုံးဝမဟုတ်ဘူး" လို့အတင်းငြင်းစရာမလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ်..တကယ် မှန်တယ်ဆိုရင်လေ......၊ "အစစ်တွေပါချည်းပါ"လို့ဆို တော့ အတုတွေရော ရောပါနေခဲ့ဖူးလို့လား..ဒါမှမဟုတ်ရှိခဲ့လို့လား..၊ "သူတို့မနာလိုလို့ပြောတာ"ကိုခံစားရသလောက် စစ်မှန်တယ်ဆိုရင် "ကိုယ့်ကိုယုံပါ"ဆိုတဲ့စကားတစ်ခွန်းနဲ့တင် မလုံလောက်ဘူးလား................။ တကယ်သိချင်ရင် မျက်စိကိုမှိတ်လို့ သေချာနားထောင်ကြည့် နှလုံးသားကတိုးတိုးလေးပြောလိမ့်မယ်..။
အစ်မရေ ကောမန့်မပြန်သေးဘူးလား... စောင့်နေတာ..။ ဒီခုကောမန့်ကိုတော့ဖျက်ချင်ဖျက်လိုက်နော်.. message သဘောအနေနဲ့ရေးတာ။